Nin Biritish ah oo Doonayey Inuu Laayo Muslimiinta, ugu Dambayn Asagii Ayaa Muslim Noqday | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Bilowga Guuldarradii Soomaaliya
Waa Maxay Af-Ruurka Adhiga (Orf Disease)?
Maxaad Ka Taqanaa Cudurada Ku Dhaca Codka?
Miski Cabdinuur Salal, February 20, 2020
Maxaabiis Dhacday Lacag Badan Iyaga oo Aanan Xabsiga Kabixin!
Xasuuqii 4 Feb 1991 Ee G. Awdal
Bashir Maxamed, February 4, 2019
Nin Biritish ah oo Doonayey Inuu Laayo Muslimiinta, ugu Dambayn Asagii Ayaa Muslim Noqday
Maxamed Xirsi Faarax — July 27, 2020
Inteena badan waan maqalnay sheekada Khaliifkii waynaa ee muslimiinta, Cumar ibnu Al-Khattab (Ilaahay ha ka raalli noqdee) taas oo ahayd in uu Nabi (scw) uu soo aaday si uu wax u yeelo isagoo seef galka ka baxsan sita balse markii uu albaabka Daar Arqam uu yimid toobadkeenay islaamkana uu rumeeyay.
Illaahay fadligiisa iyo alla kacabsigiisa darteed wuxuu noqday mid kamida kuwa ugu waa wayn saxaabada Nabiga NNKH waxa uuna kamid noqday kuwii janada loogu bishaareeyey ayagoo adduunka jooga.
Maanta sheekadu waxay lamid tahay sheekadi saxaabigii rasuulka NNKH, Umar ibn Khattab (ra). Tani waa sheekada nin Ingiriis ah oo doonayay inuu dilo inta ugu badan ee Muslimiin ah inta karaankiisa ah laakiin ugu dambayn noqday muslim.
Ibrahim Killington waxa uu kudhashay Wymondham, Norfolk, Britain. Sida dhalinyarada kale ee reer Ingriiska wuxuu ku noolaa noloshiisa salka ku haysa fikirka beenta ah ee ah ‘Waxa aad noolaan hal mar’. Wuxuu cabi jiray khamri, qaadana jirey daroogo, waxa uuna u isticmaali jirey si uu wakhtiga oo dhan ugu madadaalsho.
Waxa uu ka sheekeeyey wixii uu horey u aaminsanaa
“Ujeeddada noloshayda oo dhami waxay ahayd oo keliya inaan madadaalo, qoslo; qaabka aan noloshayda uga dhigi lahaa mid sii joogtayn karta intaa ka dhimanayso iyo ku xirnaanta dadka aad isku danaha tihiin kuwaaas oo aan ahayn mar walba dadka ugu wanaagsan.
Khibaradiisa ugu horeysay ee lama filaanka ah ee muslimiinta waxa uu dhacay 9/11. Waa uu yaraa wakhtigaas kamana uusan war hayn waxyaalo badan oo dhacaya, waxa dhan oo uu garanayey ayaa ahaa in ‘argagixisadu’ ay iclaamiyeen dagaal ka dhan ah America mana uusan aqoon kalmada ‘argagixiso’ marka kahor. Waxay dhacdooyinku siisocdaaba, waxa uu arkay ciidamo badan oo lageeyey Afghanistan iyo meelo kale. Wuxuu ka ogaaday muslimiinta; wuxuu ka aaminsanaa in ay yihiin qaar axmaqiina iyo cunfi leh oo dhib badan.
Wuxuu ka arkay telefishanka, sida ay muslimiintu xasuuqa uga samaynayaan adduunka, dalkooda iyo sida ay u dileen askar aan waxba galabsan. (wuxuu noqday dhibanaha ugu fudud ee maskaxda ay kaqabsatay warbaahinta reer galbeedku kuwaas oo sii daynaya baahintooda wararka ka dhanka ah Muslimka ee ka soo horjeedka Muslimka).
Wuxuu ku koray nacayb uu kuhaysto qalbigiisa iyo maskaxdiisa kaas oo uu u qabo muslimiinta. Nacaybka ku jira maskaxdiisa ayaa aad u kacsanaa oo wuxuu isku dayay inuu ku biiro ciidanka sedex jeer isagoo rabay in uu hadafkiisa halkaas ku guto oo uu laayo inta ugu badan ee Muslimiin ah oo uu layn karo. wuxuu u malaynayey in muslimiintu yihiin musiibada adduunka.
Qisada Ibrahim Killington waa qiso cajiib leh, waxaa laga yabaa inaad horey u maqashay, Ibrahim waxa uu kudhashay Wymondham, Norfolk, Britain. Sida dhalinyarada kale ee reer Ingriiska wuxuu ku noolaa noloshiisa salka ku haysa fikirka beenta ah ee ah ‘Waxa aad noolaan hal mar’. Wuxuu cabi jiray khamri, qaadana jirey daroogo, waxa uuna u isticmaali jirey si uu wakhtiga oo dhan ugu madadaalsho.
Laakiin allaah waxaa agtiisa ahaaday wax ka fiican isaga. Isagoo si joogto ah u dhagaysanaaya waxa ku saabsan Islaamka iyo muslimiinta aaladaha kala duwan ee warbaahinta ee faafiya nacaybka, wuxuu la kulmay Bandhig Faneed Mareykan ah kaas oo si xun uga hadlaya Nabiga NNKH.
Tani waxa ay ahayd wakhti maxkaxdiisa ay ku bilaabatay raadin waxyaalo badan oo caqli gal ah. wuxuu ka fikiray sida balaayiin dad ah u raaci karaan qof waxkasta oo uu haysto ay yihiin kuwo khaldan. Wuxuu ogaaday in Nabiga NNKH uusan khaladayn, laakiin dadka iyo warbaahintu ay isku dayayaan inay sumcaddiisa xumeeyaan.
Waxa uu bilaabay baaritaan ku saabsan waxa dhabta ah ee ay aaminsan yihiin Muslimiintu. Waxa uu ka cabanaayey Aaminaad yari dhinaca diinta ah wuxuu isku dayey waxkasta sida wathaniyada iyo khuraafaadka Scandanvian kii hore iwm.
Wuxuu caawimaad u raadsaday internetka waxa uuna ka helay ruux ka caawiya fahanka islaamka burburiyeyna fikradihii uu ka aaminsanaa diinta islaamka.
Ibrahim waxa uu la yaabay markuu ogaaday in muslimiintu ahayn sida kuwa gararka waawayn ee ku qaylinaya ‘Allahu Akbar’ dadkana qarxinaya. Ugu dambayn wuxuu kitaabka quraanka ka qaaday saaxiibkiis wuxuuna bilaabay akhrintiisa. Quruxdii kitaabka ayaa taabatay oo aad u saamaysay naftiisa.
“Intii aan ku gudo jirey akhrinta suurado kala duwan, waxaan xasuustay akhrintii dadkii gubanayey ee cabayey biyaha kulul ee dhuunta gubaya. Marka aan ogaaday nolosha aan ku noolaa ee naxdinta lahayd, waxaan dareemi jirey dhuuntayda oo gubanaysa, sidoo kale waxaana dareemi jirey sida waxani ay u yihiin kuwo run ah iyo sida ay ahayd in aan u badalo.” sidaa waxaa yiri Ibrahim.
Waxa uu aadi jirey masaajidka, maalinta inteeda badana xagaas ayuu kusoo qaadan jirey asaga oo akhrinaya quraanka iyo culuumta kale. Hooyadiis markay ogaatay inuu masjidka ku jiro waa ay naxday.
Dad aad u faro badan ayaa markay soo islaameen dhahay waxay noola ekeyd in aan ku soo laabanay guryaheenii, taasina waa dareenka aan dareemay, anigu gabi ahaantayda ma aanan ahayn aniga, ee waxyaalo kale ayaa naftayda maamulayey. sidii aan muslimka u noqday waxaa la kulmayey waxyaalo wanagsan oo kaliya.
“Toddobaadyo badan waxaan agtooda ku qaataa Muslimiinta, waxaana fahmay cidda ay yihiin iyo nooca dadnimo ee ay yihiin. Haka baqin waxa qoyskaagu umalaynayo; Waxaan lahaa dad badan iyo naftayda sidoo kale waxaan ka walwalay waxa ay waalidkay ku fikiri doonaan, laakiin ugu dambaynta maalinta islaanimada adiga ayaa iskaleh, adiguna waxaa rajaysaa in waalidkaa ay noqon doonaan kuwo wanaagsan markaas kadib.” sidaa waxaa yiri Ibrahim Killington.
Taasi waa sida uu iskuga beddelay diinta Islaamka isla markaana u noqday qof adeec ah oo muslin ah.
Tags: Biritishkii muslimka ahaa
Next post Doorasho Bilaa Saami Qaybsiya MAYA!
Previous post Maskaxdii iyo Aqoontii Wax Saadaalin Laheyd, Xaggee Bey ka Baxdey?